Ny FireFly Studio - Manaova sary sokitra ao amin'ny Rock Little
Etazonia Arkansas Little Rock
Ho an'ireo izay manana traikefa ara-kanto, misy toerana ao Little Rock hanehoana azy! Ao amin'ny Firefly, afaka misafidy avy amin'ny karazana bakteria samihafa, takelaka, kaopy, boaty ary firavaka ianao ary hosodoko amin'ny loko sy ny tanjona tianao.
Raha tsy manana artistic ianao, dia ataony mora izany! Manana bozaka manokana sy tetika manokana izy ireo mba hanampiana anao hahavita ny tapa-damba tsara indrindra.
Rehefa mandeha any amin'ny studio ianao, dia hahita ohatra vitsivitsy avy amin'ny sary hosodoko sy loko ahazoana aingam-panahy. Ny lapelina dia feno keramika tsy misy pentina miaraka amin'ny vidin'ny lisitra tsirairay. Ny vidiny dia ahitana ny zavatra rehetra ilainao mba hamitana ilay tsihy. Izy ireo dia manangona tarehimarika maro samihafa izay tonga lafatra ho an'ny ankizy, avy amin'ny dinosaurs & bibilava amin'ny giraffa & trondro. Manana fanomezana lavorary ho an'ny olon-dehibe koa izy ireo toy ny kafe, sobika sy takelaka kafe. Misy zavatra ho an'ny rehetra.
Misafidy ny sombinao ianao, atsipazo izany (ny tehina dia hampiseho anao ny fomba), andao hamafa haingana amin'ny sponjy ary esory ny lokoanao. Azonao atao ny mifidy izay loko tianao sy amin'ny loko maro araka izay tianao. Ny endriky ny tanimanga dia tsy mitovy amin'ny rehefa voatifitra ka mijery ireo ohatra eo amin'ny kilaoty akaikin'ny loko. Misafidiana ny loko ary ento ny sombinao amin'ny iray amin'ireo tabilao maro izay ahafahanao manomboka ny sangan'asanao.
Ao amin'ny latabatra, dia hahita toro-hevitra sy fitaovana fanenomana ianao.
Manana marika sy sponjy ihany koa izy ireo raha ilainao izany. Rehefa vita ny pentina, dia manasonia izany ianao ary tsy mila manamboatra sy manify. Ny ampahany ratsy indrindra amin'ny studio dia ny mitaky 5-7 andro hijerena ny tapany vita. Rehefa avy nandoa vola aho dia nilaza tamiko izy ireo fa afaka manangona izany aho.
Rehefa nitsidika aho, dia latsaky ny $ 10 ny saran-dàlana ho an'ny bitika kely ka hatramin'ny $ 48 ho an'ny takelaka lehibe.
Ny ankamaroan'ireo zavatra ireo dia manodidina ny $ 16. Io vidiny io dia misy loko, borosina ary fitaovana fanangonana hafa manampy, fanampiana avy amin'ireo tolo-tsaina raha mila izany ianao, manadio sy mamono ary "saram-pianarana". Izany dia midika fa afaka mipetraka ianao ary miasa amin'ny sombinao mandritra ny fotoana tsy ilainao, amin'ny zavatra rehetra ilainao, tsy misy vola fanampiny.
Manana programa mpividy matetika izy ireo. Raha mandany vola be ianao, dia afaka mandoko zavatra ho an'ny maimaim-poana.
Zava-niseho manokana ho an'ny ankizy (Fotoam-bavaka sy ny toby)
Misy tarehimarika manokana ho an'ny ankizy handrakitra mandritra ny fety androany ao amin'ny studio. Ny orinasa dia mitentina 15 dolara isaky ny ankizy, ary ahitana ny fitaovana rehetra vita amin'ny tanimanga ilaina. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manolotra ny mofomamy sy ny zava-pisotro fa ny studio dia manome milina fanasana, fanasana, baolina ary fanampiana mba hitazonana ireo ankizy voaro. Ny antoko dia mitaky maherin'ny 6 vahiny.
Ny studio dia mampiantrano tobim-pifamoivoizana manokana ihany koa mba hampianarana ankizy ny teknika hosodoko sasany. Antsoy izy ireo ary jereo raha misy ny kilasy manaraka.
Ny Firefly Studio dia toerana ao amin'ny Village ao Pleasant Valley (I 430 sy Rodney Parham Road). Izy ireo dia manakaiky ny Dixie Cafe sy ao amin'ny foibe fivarotana toy ny Wild Oats Market (teo aloha Beans sy Grains) sy Chili. Azonao atao ny miantso azy ireo amin'ny 501-225-1403.
Manokatra MS avy amin'ny 10: 00-6: 00 izy ireo.
Sariham-pampielezam-peo any Little Rock sy Central Arkansas
Tsidiho ny District Arts Argenta - Downtown North Little Rock
Toerana hametrahana Bachelor na Bachelorette Party
Torolalana ho an'ny Hot Springs, Arkansas
Adult Classes sy Workshops
Jazz ao amin'ny Park - Park Little Rock Riverfront
Tourisme Louisville: 20 zavatra tokony hatao any Kentucky
Porto Rico ao amin'ny Movies!
Tsidiho ny Beach tahaka ny Alemà
Ny Museum ny Children of Minnesota, St. Paul
Top Sandals ho an'ny mpivady sy ny tantely volom-borona
Aiza no hijanona ao amin'ny trano fisakafoanana romantique
Sissinghurst Castle Garden - Trano fitsangatsanganana indrindra any Angletera
Top Hotel Picks amin'ny Essence Fest